Ukuqashwa kwabaSebenzi be-Dubai kunye neNkampani ephezulu kwi-UAE 🥇
Ukuqashwa kwemisebenzi e-Dubai Ngubani esiza kuqesha? ⭐⭐⭐⭐⭐
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Novemba 4, 2017
Opportunities Jobs Jobs
Faka isicelo kwiMisebenzi e-Dubai
dubai Amathuba emisebenzi. Ngaphezulu kweendwendwe ze-25,000,000 kwinto enye e-United Arab Emirates a Imisebenzi e Dubai. Ngesi sizathu arhente zomsebenzi e Dubai ukulawula ukufumana abafuna umsebenzi kangako njengoko banokuvela kwi-intanethi. Into yokuqala yokukhumbula ngabo bonke abaqashi bemisebenzi e-Dubai kunye nabafuna umsebenzi eM Dubai ngubani okwangoku uzama ukufumana umsebenzi kwi-Dubai. Inkampani yeSixeko sase Dubai ubeke ulwazi malunga neRecruers for imisebenzi e-Dubai kwi-2018 ngale nto engqondweni siya kukuxhasa kwaye sikukhokele kumsebenzi wakho okhangela e UAE. Kodwa okwangoku, inkampani yethu singathanda ukuqala kwisikhokelo kunye nokujonga ngokubanzi uqoqosho lwase-Dubai kwaye ikunika ulwazi ngakumbi malunga iinkampani zokuqasha e Dubai naseMumbai.
Uqoqosho lwe-United Arab Emirates
The IUnited Arab Emirates ngaphambili bangasemva nje ISaudi Arabia. Ukuza kuthi ga ngoku, uqoqosho lwe-United Arab Emirates ngowona wesibini uqoqosho olukhulu kwimisebenzi eSaudi Arabia kwihlabathi leGCC. Ngomzuzwana ukusuka kwi-1996 ukuya kwi-2018 UAE ukwandisa umkhiqizo wekhaya (GDP) we-USD 770 billion (AED 3.1 trillion) kwi-2016. Ngakolunye uhlangothi, kufuneka Kwakhona kubheka iinkampani eziqeshisayo. Ngenxa yokuba ezinye zazo zikhula kwi-UAE. Umzekelo, Indawo yomsebenzi wase-Careerjet-Dubai kwaye Iwebhusayithi yokuqashwa kwe-Monster. Bafanelekile ukufaka isicelo ngeCV yakho.
Kwinxalenye enkulu nangona kunjalo uqoqosho kwi-United Arab Emirates ngokuxhomekeke kakhulu kwioli kunye nerhafu yengeniso. Njengoko kuphawulwe ukuba i-Dubai ne-Abu Dhabi sele ikhula ngokuthe ngempumelelo koqoqosho lwayo ukususela kwi-1995. Ngaphakathi isigqibo esivela kwioli, igesi kunye namacandelo eepetrochemicals, I-United Arab Emirates zikhula ziba ziyazi kakuhle imboni ye-Arab Hotel. Ngezantsi unokufumana iinkampani eziphezulu ezisebenzayo ukuba inkampani ebalulekileyo apho unakho Layisha kwakhona eUAE (kunye neMbindi Mpuma)
Jobs Dubai - Top Companies ukusebenzela e Dubai
Uluhlu lweeNkampani ezigqwesileyo e Dubai
Imisebenzi yase Dubai Marriott Hotel
Nangona oku kuyinyaniso Ihotele yaseMarriott International inkampani isebenza ngaphakathi kweehotele ze-5,700 kuwo wonke amazwe. Ngelo xesha, iqela lehotele liye laphuhlisa inkqubo yokwazisa ekuthiwa ekuqaleni. Ngenjongo entsha baqeshe abaphathi abancinci. Ukuze uyenze izinto, abaphathi abatsha badibana neqela lolawulo lijongamela kunye neehotele zeempahla kunye yonke imihla baziswa ngayo kwiinkcubeko zehhotela laseMarriott, imigangatho, imbali kunye neenjongo zokuthengisa.
Ngamahhotela e-Marriot International, kukho uncedo oluninzi lwezithuba. Umzekelo, entsha abafudukayo baseIndiya bangafakwa kwisikhululo se-UAE.
Njengomzekeliso wekcubeko le-career yasehhotela laseMariott, abasebenzi babo abatsha nabo unikwe ukhetho lokusebenza at Dubai City Ihotele yaseMarriott. Kwaye ukuba bakhangele phambili ehamba ngeenxa zonke kwilizwe kwaye esebenza e Dubai. Elinye iphuzu elibalulekileyo ukuba inkampani inceda abasebenzi ukuba baqhube phambili emsebenzini wabo kwihotele kuwo wonke umhlaba. Kule meko, i-Marriott International Hotel yenye yeenkampani eziphambili ezikhathalele ngabasebenzi bazo.
Jobs Dubai FedEx Express
Into yokuqala yokukhumbula Inkampani yeFedEx kuqinisekisa ukuqhubela phambili komsebenzi kubasetyhini abasuka kwi-UAE. Ngaphezu koko, inkampani iyazibona ngombono wayo womsebenzi. Ukubonisa kakuhle nge-FedEx babeka abantu-indlela yenkonzo-ngenzuzo yokucinga. Ububungqina obunamandla obukhulu kukulawula ngokusebenzisa iNkcazo. Ekuhambeni kwexesha, inkqubo yeenkampani ze-Fed Ex iyaqonda iqela ngalinye ilungu elithatha ngaphaya kwezinto ezilindelekileyo zenkampani. Kuhlalutyo lokugqibela, ngamnye umqeshwa uqinisekisa ukuba iimfuno zabaxhasi zidibene kwizinga eliphezulu. Ikampani ijonge kwakhona Ulawulo olutsha kwi-Area City City.
The inkampani ebhalisela umsebenzi kwi-2018. Abafunyanisi bemisebenzi yamazwe ngamazwe bathanda le nkampani. Kuba kulula ukufakwa kunye nabo. Ngelo xesha i-firm ifumana izicelo ezininzi zengqesho ngosuku. Ngoko i-CV yakho kunye nencwadi yokubhalela kufuneka ibonakale kakuhle. Kwelinye icala, nkampani eqeshwe kwihlabathi. Ngokomzekelo, unokufumana izithuba ezifanelekileyo ngaphakathi kwendawo yeGCC nge-FedEx Express.
Jobs Dubai Iimpahla zeDAMAC
Iimpahla zeDAMAC zonke izinto eziqwalaselwe ngale nkampani emangalisayo kunye nabo Iwebhusayithi yomsebenzi ophezulu e-Dubai. Njengoko kuboniswe ngentla, i-DAMAC iyona nto ibaluleke kakhulu kwiklasi yeemakethe zaseMiddle East kunye neGCC yexabiso lezentengiso kwi-2002. Ngokuqhelekileyo, i-DAMAC Properties inikeza izibonelelo zokuhlala ezimangalisayo kunye nezokunethezeka e Dubai. I gulisa amathuba ama-Indiya nale nkampani. Ngenxa yoko ikhula imihla ngemihla kwiimveliso zorhwebo kunye nokuzonwabisa kwindawo yokuMbindi Mpuma.
Kwiyona nxalenye enkulu yemarike yenkampani yeDAMAC kuquka i-United Arab Emirates, i-Saudi Arabia, i-Qatar, iJordan, iYiputa, iLebhanon, iTurkey kunye neemakethe zepropati yase-United Kingdom. Ngaphambili, ngokuqinisekileyo, i-DAMAC Properties iyinkokeli ehamba phambili yezonxuwa Izibonelelo ezintsha zeMiddle East kunye nemisebenzi yase-Emirates. Akukho mbuzo kule nkampani inzame ukubonelela ngezindlu zokuphupha kungekuDahabhi nase-Abu Dhabi kuphela. Kodwa ngasecaleni ukulawula iingcamango eziphilayo eKatar ukusuka 2015. Kubathengi kunye nokuphuma kuzo zonke ihlabathi ngaphakathi kwe-UAE.
Enye yeenkampani eziziwa kakhulu kwiGulf. Uninzi lwabafudumi basePakistan nabamaNdiya. Ukuzama ukufumana umsebenzi ngepropathi ye-DAMAC. Kwelinye icala, ukuba ufuna ukufumana umsebenzi eDubai. Kuya kufuneka uyithathele ingqalelo i-DAMAC kuba kule nkampani inamathuba amaninzi zokuthengisa, njalo qalisa ngeengcali zokukhangela!.
I-Dubai Jobs ACC - Arabhu Inkampani yoKwakha
I-ACC (i-Arabian Construction Company) wadalwa ukubonisa Izakhiwo zase Dubai. I-Acc yasungulwa kwiLebhanon kwi-1967 kodwa ngokuqinisekileyo, ibe yikwakhi-phambili eqinile kwinqanaba leGCC. Kufuneka ukhunjulwe ukuba iphothifoliyo yenkampani iquka ininzi yeMbindi Mpuma kunye ne-Indiya kunye nezobugcisa. I inkampani inikeza uhambo lokungceli-dliwano-ndlebe nabafunayo bemisebenzi esuka e-UAE. Enyanisweni, kwi-51 iminyaka ye-Arabia Construction Company, ine-investments ephezulu e-UAE kwaye yakha izixeko ezinkulu ezifana neDaibhi, Abu Dhabi, Doha, neLondon. Ngakolunye uhlangothi, inkampani isetyenziselwe izibonelelo kwiinkampani ezinkulu zoshishino.
Emva koko i-ACC yakhiwa ngononophelo lwezempilo olumangalisayo eKatar. Iyona nkampani ebhetele Imisebenzi yamahotele ekwindwendwe e Dubai. Nangona ulawula i-3,600,000 iiprojekthi zorhwebo kunye neendawo zokuhlala imihla ngemihla. Kodwa ngokwenene inkampani, ingqwalasela ephambili ekunikeleni iiprojekthi eziphezulu ngelixa zigcina impilo ephezulu kunye Imigangatho yokhuseleko kwilizwe lezorhwebo le-Arabhu kwixesha elizayo leMisebenzi e Dubai.
Inkampani yolwakhiwo iAcc Arabia ilungile kakhulu kubasebenzi basekhaya. Qiniseka ukusebenza nzima ukubonelela ngemisebenzi emitsha eDubai ye Indian. Ngoku siyanceda ukufumana ulwazi malunga ne-Dubai ne-Abu Dhabi. Unokufumana amathuba emisebenzi yamaphupha ngaphakathi kwe-UAE. Ngale nto nkampani emangalisayo.
Imisebenzi yase Dubai Al Hokair Group
Imisebenzi e-Al-Hokair Group njengengxaki yeqela le-Alhokair igama eliye laziwa ngokubanzi kwi-Dubai City kunye ne-Dubai blog. Ekukhanyeni kwama-Arabs International kunye nokuzonwabisa kwi-Alhokair iqela elilawula iihotele kunye neefashoni zokuthengisa iimashumi eminyaka. Inkampani e Dubai iyaziwa kakuhle uncedo olusemthethweni ngomsebenzi wokukhangela umsebenzi wase-Dubai. Ngaphaya koko, iVenkile yefashoni yeAl Hokair kwaye yasekwa ngokuchaseneyo xa i-UAE iqala ukuphuhliswa ishishini yayiyi-1990. Njengokuba ngenyaniso, imisebenzi yenkampani isasazeka kwimimandla eyahlukeneyo kungekhona kuphela kwi-UAE kodwa kwakhona, uBukumkani baseSaudi Arabia, iMENA, i-Asia ephakathi kunye neYurophu. Isampuli yeenkampani abaziphetheyo: i-Banana Republic, iBershka, Costa Coffee, Stradivarius, Topshop, iZara kunye ezininzi ngakumbi e Dubai.
I-Al-Hokair Group - Imisebenzi e Dubai
Ngendlela efanayo, i-corporation ibe igama lokuqala kwi-United Arab Emirates kunye neAradi Arabia. Ukungatsho nto yeKatar xa ifika kwingqondo yomsebenzi eMiddle East. Ekubeni ukhenketho kuza kwilizwe laseArabhu likhuthazwa ukukhula ngokweenqanaba. Ngokubaluleka kwenkcubeko nenkampani iqela kwi-1975 ngokubanzi ukutyalomali kwishishini lokuzonwabisa kunye nokunakekelwa kwezihambi phantsi kolawulo lukaSheikh Abdulmohsin Alhokair. Ngale nto engqondweni Ngama-5 eminyaka, edlulileyo iiprojekthi zeqela zanda ukugxininisa ukuya kumaziko okuzonwabisa e-79 e-UAE. Elinye iphuzu eliphambili kunye ne-Al-hokair kukuba banamahotele e-34 asasazeka kwiiMelika yase-United Arab Emirates, eSaudi Arabia naseQatar. Amacandelo ama-hokair anika umsebenzi wokuhlaziya abathunywa belizwe kunye ne-MBA imfundo.
Imisebenzi yase Dubai Ericsson Inkampani
Kwimarike ethile, Ericsson Inkampani inenkqubo ngaphakathi indawo ngamnye umcebisi womsebenzi e-Dubai. Ukuyibeka ngenye indlela, ngoku baqesha iinjineli kunye nabaphuhlisi eDubai. N ingqalelo inombolo kanomyayi ukugaya loo nto iqinisekisa ukuba ishishini likhule Ke inkampani iqesha abantu abanxulumene ngokusondeleyo nenkcubeko yayo ngefowuni kunye nohlobo lwayo WhatsApp abaphuhlisi. Kubalulekile ukuqaphela oku kwenza ukuba abatsha bafuna umsebenzi ukuba baphumelele kwinkampani yabo ehamba ngokukhawuleza.
Okumangalisayo kukuba le nkampani sisasebenza kwimarike yehlabathi. Ngecala elincinci, inkampani iye yavelisa inkqubo yokukhuthaza ngamnye umsebenzi. Ngoko ke kunceda ukuphathwa okusemgangathweni ukuze kufumaneke lula ngaphakathi kwenkqubo yokunyusa indlu. I-Ericsson yenye yeenkampani eziphambili kwiifom ze-blue chip development.
Inkampani yakwa-Ericsson isoloko iqesha abaphathi abatsha. Ngokukodwa ukuba ufuna umsebenzi wokuthengisa kwi-UAE. Le ngenye yeenkampani ezintle ukuqala ukusebenza. Ngaphantsi kweemeko, kufuneka uqale ukukhangela kwiwebhusayithi yazo.
Imisebenzi yase Dubai Omnicom Media Group Mena
Enye ngundoqo kwi-career e-Dubai ingayi Omnicom Media Group (OMG). Inkampani ifuna abasebenzi bayo ukuba banandiphe ukulungelelanisa umsebenzi osebenzayo ngaphakathi kwendlu. Kwimeko elungileyo, i-OMG iqhuba Ukuhlaziywa kwabasebenzi kwiforum yabo. Xa kuvumela abasebenzi ukuba babhale iingcamango ezintle kunye nokunganeliseki malunga naziphi na iinkxalabo ezinxulumene nomsebenzi wabo. Omnicom Media Group lijolise ngokukodwa kwi-career balance-life balance.
Ubuninzi obunobungqina bolawulo lwabo lubangela ukuba inkampani ibonakale njengemibutho ephezulu ephezulu apho umqeshwa kufuneka adibanise Indlela yokuphila yase Dubai, impilo kunye nokuphila kakuhle kwinkcubeko yaseMiddle East. Ukuyibeka ngenye indlela, umbutho kwakhona banandipha ukuzinikela kwabasebenzi bokwenene nokuzinikela, ngakumbi kwii-Leadership leaders ze-OMG, yathi i-GPTW Institute.
Kananjalo, qhagamshelana no-Omnicom Media Group Management kwi-LinkedIn
Imisebenzi yase Dubai DHL Global Logistic
DHL Jobs e Dubai, inqaku lidlalwa libala imisebenzi yenkampani yemoto e-Dubai ulayishe umsebenzi wesicelo kwaye ulindele inkxaso. Ngokuqhelekileyo ethetha neDHL uzakufumana yonke into oyifunayo ukuba ube nabaqashi be-Dubai endaweni ye-Airport. Ukukubeka ngenye indlela, inkampani ibonisa indlela oqala ngayo umsebenzi omtsha kwiiveki. Ukushwankathela isicelo sakho ngeDHL. Wonke umntu unelungelo lokusebenza nale hlobo iinkampani imisebenzi eM Dubai.
Isishwankathelo kule website ye-Dubai yomsebenzi, unayo ithuba elihle lempumelelo kwimisebenzi ye-Dubai kunye nokuhamba. Ngokwenxalenye enkulu, i-DHL inikeza inkqubo elula yokufaka izicelo abafuna umsebenzi. Okwangoku, inkampani ikunika iingcebiso malunga nendlela yokubhala isicelo sokuphumelela kunye nenkampani kwiwebhusayithi ukuphendula imibuzo evame ukubuzwa malunga nomsebenzi osebenzayo ngaphakathi kwenkampani ye-DHL. Kule meko, kulula ukufumana umsebenzi e-Dubai.
Jobs Dubai Pepsico Dubai
Kungekudala okanye kamva kufuneka ngenise i-CV yakho yokuhlaziywa ukuba Imisebenzi yePepsiCo nkampani. Ngexesha elifanelekileyo uPepsiCo uza kukubiza. Ngethuba nje ubhalise nabo uya kukwaziswa ngeemeko ezizayo kwi-United Arab Emirates. Ngokukodwa xa uphinde uqalise izakhono kunye nomdla weenkampani. Kuhlalutyo lokugqibela, inkampani ayisebenzisi nje kuphela eDaibhi kodwa nakwihlabathi lonke. Umzekelo abafuna imisebenzi eMzantsi Afrika. Okwangoku abasebenzi basePepsiCo basebenza nzima kanzima ukunika abantu iinjongo zokuqala zePepsi. Ngokomzekelo, umqeshwa wasePepsico kunye nabaphathi abaphezulu bahlala behlakulela ukuthanda nokutya okufunekayo abathengi.
Imisebenzi yase Dubai IYONE Ifenitsha yase Dubai
Eyona Tshintsha ihlabathi kunye nenkampani yefenitsha e-Dubai. Phakathi kwendawo yokuthengisa ifenitshala, bonke abafuna umsebenzi bakholelwa ukuba ukufumana umsebenzi eDaibha inenjongo ephakamileyo. Enye inkampani ifuna ukutshintsha ihlabathi kwaye yenza eMbindi Mpuma indawo engcono. Ngeli xesha lenkampani ikhangele abantu abasebenza ngentliziyo yabo. Thumela i-Resume yakho kunye nencwadi yokuthunyelwa kwiinkampani zikaRhulumente. Enye inkampani ichaza ngokucacileyo ukuba yeyiphi indawo kunye nelizwe olifaka isicelo.
Ngaphantsi kwezo meko, umqeshwa onenkampani enye unombono ofanayo nabanye ababelana ngexabiso eliphambili kwihlabathi lefenitshala. Uthande uMbindi Mpuma, Yenza into eyenziwe kwaye ukholelwe kuwe. Ngenxa yoko kunye nale nkampani imihla ngemihla kufuneka ulandele la maxabiso. Okumangalisa kukuba awuzami ukufaka isicelo ukuba awuyena mntu. Inkampani enhle kakhulu abaphathi abakhangela umsebenzi kunye ne-MBA.
Imisebenzi e-Dubai - Enye indawo engcono kakhulu yokusebenzela e-UAE
Unzinzi lwendawo, YONYE inkampani ibe ngenye yeyona ndawo efanelekileyo kunye negama elibizwa ngokuba yi7th Best Workplace e-Asia kwaye yavota i-UAE yeN1 Local Umqeshi wabazingeli bemisebenzi eMbindi Mpuma. Kwangelo xesha, enye i-2nd yeNdawo yokuSebenza eBalaseleyo ukusuka kwi-2016 kwi WhatsApp Group. Ku qalisa umsebenzi wakho ngeyona nkampani ebhetele kwimakethi yentengiso. Unokuphumelela kakhulu imisebenzi yokuthengisa e Dubai. Yonke le nkampani ngequbuliso ithatha ukuba yinxalenye yeqela elinomdla lokuthengisa kunye neqela lokuthengisa ukuze ukwazi bancede batshintshe ihlabathi leArabhu.
Imisebenzi yase Dubai Joyina iqela leDell e Dubai
Joyina iqela leDell, Qala Umsebenzi kwiDell ngokukhawuleza enye yeyona nkampani ebhetele kwihlabathi basePakistan. I-website ye-Dell yenkampani yomsebenzi e-Dubai ungayifumana ingapheliyo ithuba lomsebenzi kwiPakistan e Dubai. uphi umngeni kunye nomvuzo wempangelo kwi-UAE? Kubalulekile ukuba u Dell afumane ithuba kwihlabathi liphela eIndiya, eYurophu, eUSA nase Khanada. Enye ingongoma ephambili nale nkampani a iqela labazalwana bamazwe ngamazwe.
Enye into, inkampani ivuselelwa ngokuthengisa ngokuthe ngqo kunye nokuthengiswa ngaphakathi ngaphakathi-ngaphandle. Ngaloo nto engqondweni yenkampani, inkcubeko ijolise kwi-2019 entsha ukuqesha kunye nokusetyenziswa ngokubanzi abaqashi base Dubai. Ngoyika ukuba abaphiswano baya kubahlasela uDell zenziwe ngewebhusayithi enezandla e Dubai. Abantu abazinikezele ngokufanelekileyo benza imisebenzi yabo efanelekileyo kunye nokuqhuba ukuthengisa nokuphumelela kwe-IT kumthengi ngamnye kwi-Dell UAE.
Izithuba zezithuba zemiSebenzi yaseDell kubantu abafuna imisebenzi yamazwe ngamazwe e-UAE
Ekugqibeleni ukuba, Unokufumana imisebenzi eDaibha kunye noDell njengaye imisebenzi yokuthengisa, izikhundla zokuthengisa e-Asia, ubunjineli msebenzi kwi-UAE, iimali zeendawo zengingqi, uMmeli wezemfundo kunye nomsebenzi kwiDell, abaphathi abakhulu, imisebenzi yokusebenza, izibonelelo zabasebenzi kwaye unokuba ngumnye wabaqashi beDell kwimisebenzi e-Dubai kunye nezinye izithuba zemisebenzi eYurophu naseMpumalanga Mpuma.
Ngokumangalisa inkampani inomsebenzi onamandla kwi teknoloji. Kwaye sibhala kulo ibhulogi yethu eMbindi Mpuma. Into yokuqala yokukhumbula iqhuba iDell ngenxa yokuba baqesha i-arhente yezemisebenzi engcono kwiDaibha. Ngenkcukacha, inkonzo yabo yi100% kubazingeli bamathuba ngamazwe e-UAE. Inkampani yeDell yakha ixabiso elinamandla kwimisebenzi yokuthengisa e-Dubai, kunye neendawo zokusebenzela ezihlukeneyo kwaye zibandakanya kunye nokulawula izithuba ezifanelekileyo zokusebenzela e-Dubai.
Imisebenzi e Dubai - Iqela le-Apparel
Imisebenzi yase-Dubai kwiqela le-Apparel kunikwe inkampani enamandla ukuze ube yinkokheli kwimeko yezoshishino ngokukhawuleza kunye nezoshishino kwi-United Arab Emirates. Iqela le-Apparel ekwenzeni umsebenzi ngumsebenzi qalisa kwaye wakha ngokukhula okuqinileyo kumsebenzi wakho. Ngaloo nto engqondweni, impumelelo yeqela le-Apparel iBrands yilawulo lwabaphathi kunye nabasebenzi. Ngokuqhelekileyo inkampani ngaphakathi kwamandla, inzondelelo kwiofisi kunye nobuchule kwiimveliso zentengiso. Inkampani iqhuba amanqaku afakwe phezulu njengeCalvin Klein, uCath Kidston, iDune London apho baqhubela phambili ukuthengisa indawo ehamba ngokukhawuleza kunye neentengiso eziseMelika yase-United Arab Emirates.
Imisebenzi yeqela le-Apparel e-Dubai City nase-Abu Dhabi
Elinye iphuzu eliphambili neqela le-Apparel liyi-internship inkqubo kwi-UAE. Injongo yenkampani ngokukodwa kukubonelela ngabafundi nabafundi abatsha ngokugqiba ngokugcwele ngokupheleleyo imisebenzi yezithuba ze-UAE kunye amathuba emisebenzi ekhoyo kuMbindi Mpuma kwishishini lokuthengisa. Ngenjongo yokwandisa iziqinisekiso zeqeshiso zesebenzi zenguqu yokuguqula ukuziphatha ngaphakathi kwenkampani.
Ngakolunye uhlangothi, inkampani ngokwenene ukuncedisa ukufumana umsebenzi kunye nezakhono eziyimfuneko ukuqala umsebenzi omtsha kwiqela le-Apparel. Ngokubaluleka ngokubhekiselele kwindlela yokuphila enomsebenzi othembisayo ekuthengiseni kufuneka ufunde kabanzi malunga neqela kwiinkcukacha. Njengoko kunjalo, inkampani Unamathuba okufundela e-Dubai City nase-Abu Dhabi, ukufumana umsebenzi kunye neqela nceda uvakashele Icandelo likhathalelo leGoogle.
Imisebenzi yase Dubai ImiSebenzi kwi-MasterCard
MasterCard enye inkampani yezobuchwephesha e-United Arab Emirates ukuba bangathethi nto kwiintlawulo zeentlawulo zehlabathi. Nangona le nto inokuba yinyaniso ye-MasterCard yinkampani ye-No.1 kwaye isebenza kwinkqubo yokuhlawula ngokukhawuleza yehlabathi. Futhi iqhutywe kwi-database ye-85,000,000 yedatha ngaphakathi kwenethiwekhi yonke imihla. Ngakolunye uhlangothi, i-MasterCard abathengi abathengi baseMiddle East, iYurophu, eKhanada, e-Asia, nase-US.
Inkampani ihluke kwezinye iindawo zemali kuba ba sebenza ngokukhawuleza. Ngexesha elifanayo i-akhawunti yokuvula i-akhawunti yabarhwebi, ukunceda imibutho yoorhulumente ngaphakathi kwimeko yoshishino. Ngokuchaseneyo neentlawulo, inkampani yenza amashishini angaphezu kwe-250 kumazwe nakwiindawo ezifana neQatar ne-UAE. Ewe, iimveliso ze-Mastercard kunye nezisombululo zona zilungileyo kwihlabathi. Enyanisweni, inkampani nayo Imisebenzi yokuqashwa e-Dubai iyatholakala kwi-2018.
Umsebenzi kwiSplash - Top Companies ukuya Sebenza e Dubai
Kakade, i-14 Amazwe asebenzele kwaye kuquka ezifanelekileyo kwimisebenzi eMiddle East, I-Afrika, iYurophu kunye neKhanada kwaye kwakhona iphinda i-Indian subcontinent. Kubalulekile ukuqonda ngamnye Dubai Job ufuna inkampani Qinisekisa ukuba wonke umntu unokufumana umsebenzi kwaye abe ilungu leqela eliseSplash. Ngaloo mpahla unobungozi uphahlaza umqeshwa ngamnye ngombane nangokonwaba ukuba basebenze e Dubai.
Kwixesha elide inkampani eMbindi Mpuma soloko ekhangela abantu abanomdla kwaye bekulungele ukusebenza eMiddle East. Ngokuqhelekileyo ethetha kule mihlaba yomsebenzi kwi-UAE inkampani eyenza ulawulo oluqulunqayo kunye nokukhuthazayo. Emva koko, ukuba ulungele iithagethi ezintsha kwaye ufuna ukuzonwabisa kwaye uqale umsebenzi kwiinkampani eziphezulu ukusebenzela i-2015 - 2016. Splash yenza umahluko kummandla ophakathi weMpuma ophakathi.
Izikhundla zeZithuba ze-Dubai - IP Agency Weber Shandwick
Umsebenzi kwi-PR Agency Weber Shandwick. Umsebenzi oqhelekileyo we-Weber Shandwick nguwe indlela enhle kakhulu yokuqalisa umsebenzi kwi-UAE. Amathuba avela asuka e-Dubai City. Zonke izinto zibonwa kunye no-Weber Shandwick unokumangaliswa nokuba uvela eIndiya okanye ePakistan. Ukususela ngexesha eliqinileyo ukunyusa i-WhatsApp Group ukuqashelwa kwiifowuni zefowuni, ngaphandle kokulibaziseka ngokuqeshwa kwabasebenzi bezentlalo, ngokuqhelekileyo, abalobi beenkcukacha zokubheka abaculi kunye neendaba ezihlangeneyo ze-IT. Njengoko kunjalo, inkampani isebenza kunye nabaqashi bemisebenzi e Dubai.
Imisebenzi eDaibha i-graduate entsha Estée Lauder
Ngethuba nje ufaka izicelo kwi-UAE zama Estée Lauder Iwebhusayithi yomsebenzi e-Dubai yakho imisebenzi entsha ingaqala apha kunye nale nkampani ephezulu. Kuze kube ngoku, abacebisi bezeNtengiso e-Estée Lauder phantse bahlala beqeshwe ngabaqeshwa abakhankanywe kwiivenkile. Ukuqala apho ungasebenza khona nantoni na e Dubai, Abu Dhabi, Doha kunye nezinye ezininzi. Kutheni kufuneka ukhethwe ukuba uqeshwe kwivenkile kunye no-Estée Lauder ?. Ukunikezelwa kwezi ngongoma, kufuneka uthande ukuthengisa kwaye ube nesebenzi ephezulu e-Dubai. Ngokwenene, ukuba unesiqinisekiso esiphambili esikolweni esiphakamileyo okanye ukuba unamava amandulo ekuthengiseni okanye kumava enkonzo yabathengi ukuba inkampani yinto yokuqala ngenxa yomsebenzi wakho omkhulu e Dubai.
Jonga kwiindawo ezimbalwa kunye nale nkampani:
Isixhobo sokugqibela sezithambiso umlawuli indawo
Isikhundla Esilawulayo se-Akhawunti
Isikhundla seMfundo ePhakamileyo
Imisebenzi e Dubai - Ii-career ze-Hilti
Umsebenzi wekhampani e-Dubai kunye ne-website ye-Hilti yomsebenzi e-Dubai. Ngokukhawuleza okanye kamva uya kuthi ukulungele ukuthola inxaxheba entsha. Kufuneka, ukuba uqale, izithuba zemisebenzi zakamuva ku-Hilti. Okwangoku, ngeli qinile, unokucoca imisebenzi yezithuba kunokuba ukukhangela ezinye zeejenti zomsebenzi e-Dubai. Ngenjongo yokukhangela imisebenzi yendawo yeshishini okanye okanye babe nomsebenzi welizwe elijongene ne-UAE. Ngakolunye uhlangothi, ukuba awukwazi ukufumana isipho somsebenzi okwangoku kufuneka uthumele i-CV yakho kwiindawo ezifanelekileyo zebhanki ezizayo.
Ngethemba lokuba lakho msebenzi wephupha kuza ngaphezulu nceda uqhubeke ujonge iveki nganye yokuKhathalelwa kweNkathalelo yeNkampani njengeqonga elihlaziya imisebenzi rhoqo ngaphakathi Dubai nge-visa okanye ngaphandle kwamathuba e-visa. Njengokuba kunjalo, unakophelisa isicelo esihle kakhulu somsebenzi kwaye ulinde nje ukunyakaza komsebenzi.
Imisebenzi yase-Dubai - iMisebenzi yeMars
Ngenjongo uphando lomsebenzi Kumsebenzi we-Emirates kwinkampani yaseMars ngaba yiyiphi le nifuna yona ngokwemisebenzi. Ngale nto engqondweni, inkampani ineendawo ezininzi kwilizwe lonke le-UAE kunye nehlabathi. Le webhusayithi yomsebenzi eDubai ifuna ukuba uhlale unxibelelwano nabanye abantu abangaziyo indlela yokufumana umsebenzi e-Dubai. Abazingeli beJob bathanda imisebenzi yabo yokuthengisa kwi-network ye-Dubai. Ukwesaba ukuba isicelo somsebenzi siya kuthatha ixesha.
Kufuneka ufake kuphela i-imeyile-id kwaye uthethe amagama ambalwa malunga nawe namava emisebenzi. Ngendlela zonke, i inkampani iya kugcina wonke umzingeli umsebenzi malunga neengcebiso ezizayo zeengcebiso ze-2019 emisebenzi ejongene namava obomi bakho. I-Mars yiwebhusayithi ephuhlisiwe kakhulu e-United Arab Emirates. Kwaye ngakumbi, unako fumana umsebenzi kunye nabo ngokuthetha nabaqashi be-HR.
Indlela yokuya e-Dubai ngemisebenzi?
Ngenjongo ukuqashwa e DubaiJoyina abucala bethu kwiQela leWhatsApp okanye ukongeza iinkcukacha zakho ze-imeyile apha ngezantsi. Ngale njongo, iqela lethu liya kuba nakho ukuseka izilumkiso zomsebenzi Imisebenzi yamashishini yeehotele. Imisebenzi yeoli neGesi e-Dubai, IT Career e-UAE, izithuba zokuthengisa kunye nezithuba zokuthengisa. Ukuze ndi fumana abaqeshi bemisebenzi yokufundisa e-Dubai, kwaye uthumele iinkcukacha zakho kwi-arhente yomsebenzi e-Dubai. Ngokwenene imveliso yomsebenzi kunye nokuhlaziywa, ungayifumana ngokungongeza i-imeyile okanye izimvo kwicandelo lokuqhagamshelana nabo.
Kubalulekile ukuqonda kunye ne Dubai ngokufumana inkqubo yomsebenzi kukuba sinophezulu zibalwe ngabaqeshi bemisebenzi e Dubai. I-Dubai City Inkampani eneenkampani zabaxhasi behlabathi base-United Arab Emirates naseQatar. Ngoqwalaselo kwiinkampani ezintle e Dubai, abathengi bethu bafuna ukuqesha abaviwa abasebenza ngokutsha baseIndiya.
Imisebenzi e Dubai kunye ne-Dubai City Inkampani
Into yokuqala yokukhumbula utshintshe umsebenzi wakho kwaye unokungena ngokukhawuleza Jobs Dubai. Ukuba usebenza ngokutsha kumanqanaba amancinane ezweni lakho. Zama ukunyuka ukuya kumazinga aphezulu ase Dubai. Ukubeka enye indlela yokubamba umsebenzi kumasebe afana neenkonzo zokuvelisa e-Abu Dhabi, Umlawuli we-HR umsebenzi e-Dubai, ulawulo olulula umsebenzi wokuqhuba umqhubi nje kuphela, Ulawulo lwehotele imisebenzi eDubai, izithuba zomsebenzi ezingekho kude nonxweme, umsebenzi oselunxwemeni e-Abu Dhabi, ukuthengisa kunye nokuthengisa imisebenzi ephezulu eDubai, imisebenzi yezokhuseleko kwi-GCC.
Qhagamshelana nathi apha iinkcukacha zokujoyina i-Dubai ukuqashwa amathuba emisebenzi WhatsApp Groups. Enye ingongoma ephambili kunye nenkampani yethu yile uya kufakwa kwiqela labaqashi e-Dubai. Kanye kunye neprofayili yakho iya kuba kwi-database yolondolozo e-Dubai. Kwimeko elungileyo, awukwazi ukuba ziphi na iziphathamandla zeenkampani zabaxhasi ngqo zizakuqhagamshelana nawe.